WADAMADA AFRICANKA AH CIDI MA AAMINTO NINBAA SUBAX DALKII INQILAABAYA | Toggaherer's Weblog
ARDAY WAXBARASHADA CAGAJIID KA AHAA OO HADANA UGU SAREEYEY NATIIJADII IMTIXANKA DALKA
WADAMADA AFRICANKA AH CIDI MA AAMINTO NINBAA SUBAX DALKII INQILAABAYA
Hargaysa 25 Feb 2009 (THN)
Xukuumada oo muujisay in lagaga baxay heshiiskii Warshadaha Berbera lagu dhagax-dhigay
“Wadamada Afrikaanka ah ciddina ma aaminto oo ninbaa subax dalkiiba Inqilaabaya”
“Madaxweynuhu dedaal badan ayuu u galay in shirkado shisheeye maalgashadaan dalka, laakiin caqabadaha warshadihii Berbera helay waxa weeye……”
“Qofbaa dhoofaya oo warshad tuurta ku soo qaadanaya… hadhowna waa warshed reer dhami leeyahay ayaa la diidey.”
“Burco oo kale, waxaanu ugu tala-galay inay noqoto Magaalo warshadeed. Hargeysi xarunta siyaasada ee dalka laga hagayo. Berbera… Booramana….,” Wasiirka Wershadaha
Hargaysa (THN) 25 Feb 2009
Wasiirka Warshadaha Somaliland Maxamed Saleebaan Maxamuud (Maxamed Saleebaan weyne) ayaa markii ugu horeysay mujiyay in lagaga baxay heshiis hore xukuumadu u baahisay oo sheegayay in Shirkado Jarmal ahi ka dhisayaan magaalada Berbera Sadex Warshadood, kuwaasoo Madaxweyne Rayaale dhagax-dhigay.
Wasiirka warshadaha oo xalay u waramay Telefishanka madaxa-banaan ee Speace chanal waxa uu sheegay in Xukuumad ahaan ay dedaal badan u galeen in ay dalka yimaadaan shirkado shisheeye, balse taas ay caqabad ku noqotay Ictiraaf la’aantu.
“Wadamada Afrikaanka ah ciddina ma aaminto, sababtoo ah ninbaa subax iska soo kacaya oo dalkiiba waan inqilaabay odhanaya.” Sidaas ayuu yidhi waxaana uu intaa ku daray wasiirku oo sheegay in dalka Somaliland caqabadaha ugu waaweyn ee shirkaduhu ugu dhiiran la’yihiin inay maal-gashadaan ay tahay Ictiraaf la’aan iyo adeegyadii sahli lahaa oo aan jirin.
“Madaxweynuhu dedaal aad u weyn ayuu geliyay sidii dalka shirkado shisheeye u iman lahaayeen, laakiin caqabadu waxay noqotay oo waxay socotaba loo imanayaa xeerarka maalgashiga iyo Ictiraaf la’aanta dalkeena.” Ayuu yidhi, Mudane Maxamed Saleebaan, waxa uu ku dooday inuu jiray heshiiska hore xukuumad ahaan ay u sheegeen in Boqolaal Milyan oo doolar Sadex-warshadood oo Sibidhka, Jibsinka iyo dhuxul-dhagaxda lagaga hir-gelin doono dalka.
Hase ahaatee, arrimaha dedaalkaas suuldaaray ee uu ku sheegay inay heshiiskaasi u socon waayay ka sokow, waxa uu ku adkeystay inay weli jiraan xidhiidho shirkado shisheeye oo maal-gashi ay la leeyihiin.
Wasiirka warshadaha oo ka hadlayay mudadii uu xilka hayay, waxa uu sheegay inay sameeyeen xeer loogu tala-galay in lagu maamulo, Islamarkaana kala haggo warshad-leyda.
Waxaana uu ku taliyay in warshad leydu xidhiidh joogta ah la yeeshaan wasaarada. Isaga oo muujiyay in ay jiraan dad aan wasaarada wax talo ah kala yeelan arrimahan warshadaha. “Qofbaa dhoofaya oo warshad tuurta ku soo qaadanaya… hadhowna waa warshed reer dhami leeyahay ayaa la diidey.” Ayuu yidhi Wasiirku.
Waxaana uu intaa ku daray oo uu sheegay in xeerka ay sameeyeen saameynayo qaabka muwaadinka ama shirkadu u dhisayaan Warshadaha oo ay tahaybuu yidhi in la kala fogeeyo. goobta wax soo saarka, xafiiska maamulka iyo Kaydka wax soo saarka warshada. “Taas waxaa loo sameynayaa, si aan hadii dab dhaco u wadda guban ee wax u kala hadhaan.. ta kale, waxa ku jirta inaynu la noolaano dabeecada dalkeena.. maadaama aynaan haysan caawimo dibadeed dal la ictiraafsan-yahayna aynaan ahayn in mulkiilaha warshadu isku tashado oo uu Barkad loogu tala-galo dabdemiska ka dhex dhiso weeye,.” Sidaas ayuu yidhi.
Wasiirka oo la weydiiyay, in warshadaha ay ugu tala-galeen goob dalka ka mid ah oo gaar u noqota Warshadaha waxa uu sheegay in weli xaaladu yabyab-tahay, balse aanu meesha ka madhneyn qorshahaasi. Waxaana hadalkiisa ka mid ahaa oo uu yidhi. “Burco oo kale, waxaanu ugu tala-galay inay noqoto Magaalo warshadeed. Hargeysi xarunta siyaasada ee dalka laga hagayo.. Boorama, waxbarashada, Berberana Ganacsigii iyo..”
Waxa kale oo uu wasiirka Warshaduhu ku sheegay waraysigan in dhawaan masuuliyiin ka kala socota Wasaaradaha dalka Somaliland ay ka qayb-geli doonaan shir uu soo qaban-qaabiyay dalka Faransiisku oo ka dhacaya Dalka Jabuuti. Kaasoo uu sheegay inay arrimahan maal-gashiga iyo kobcinta dhaqaalaha warshadaha kaga hadli doonaan.